Spraying Ngwá Ọrụ Suppliers na Factory - China Spraying equipments Manufacturers
Orchard Misisting igwe
Ngwaahịa zuru ezu Orchard sprayer bụ nnukwu igwe dị mma maka ịgba ọgwụ na-egbu ihe na nnukwu ubi mkpụrụ osisi. Ọ nwere uru nke mma ịgba mma, obere pesticide ojiji, obere mmiri oriri na elu mmepụta arụmọrụ. Ọzọkwa, ọ naghị adabere na nrụgide nke mmiri mmiri mgbapụta iji atomize mmiri mmiri. Kama nke ahụ, onye ofufe ahụ na-ebute ikuku dị ike iji fụọ ụmụ irighiri mmiri n'akụkụ dị iche iche nke mkpụrụ osisi. Igwe ikuku di elu nke fan na enyere umu ogwu aka iba ...
Onye na-akọ ugbo
Product Ihe RY3W ọganihu sprayer suiable maka nile di iche iche nke traktọ, ọ bụ mgbanwe were, mfe ọrụ, na-emekarị iji kpochapụ ọrịa na ahụhụ ahụhụ ofcrops, foliar edozi na weedicide ịgba. Ihe nkedo traktọ ahụ bụ nke dabara adaba maka ịgba ihe ọkụkụ na mbara ala, ma kwụgidere traktọ ahụ. The PTO mbanye aro ejikọ traktọ na sprayer mgbali mgbapụta, na mgbali mgbapụta nfuli ọgwụ na ịgba mkpanaka na sprays site na noz ...
Ngwaahịa zuru ezu atomizer ọhụrụ na-eji teknụzụ nke oge a, injin jet na-enweghị mmezi, enweghị akụkụ ọ bụla, enweghị usoro mmanu, usoro dị mfe, enweghị eyi n'etiti akụkụ, ọnụego ọdịda dị ala, ogologo ndụ ọrụ, na ndozi dị mfe. Na obere mmanụ ụgbọala oriri na elu na-arụ ọrụ arụmọrụ, ọ bụ ezigbo elu-tech ngwaahịa maka pesticide spraying na disinfection.The igwe bụ sọrọ nzube igwe na ezi uche price na anụ àgwà. Uru 1. Igwe a ...
Ngwaahịa zuru ezu A na-ejikarị igwe eji eme ihe na-eme ka mkpụrụ osisi na-achịkwa pests na ọrịa, njikọta foliar, akwukwo nri na akwukwo nri, oke ohia na-egbu ahihia, spraying nke ahịhịa ọgwụ tupu ịgha mkpụrụ, na ịkọ ọhịa obodo. Nkọwapụta Ngwaọrụ Nka na ụzụ 3MZ-300 3MZ-400 3MZ-500 3MZ-600 3MZ-800 3MZ-1000 ikike L 300 400 500 600 800 1000 Vetikal Firing anya m 6-8 6-8 6-8 6-8 6 6 -8 Na-arụ ọrụ arụmọrụ ...
Product Ihe RY3W ọganihu sprayer suiable maka nile di iche iche nke traktọ, ọ bụ mgbanwe were, mfe ọrụ, na-emekarị iji kpochapụ ọrịa na ahụhụ ahụhụ ofcrops, foliar edozi na weedicide ịgba. Nkọwapụta Nka na ụzụ Nkọwapụta Ngwaọrụ RY3W-400 RY3W-500 RY3W-600 RY3W-700 RY3W-800 RY3W-900 RY3W-1000 Ejiri ike hp 30-60 30-60 40-80 40-80 50-100 50-100 60-120 Tank olu L 400 500 600 700 800 900 1000 Na-arụ ọrụ obosara ...